पोखरा विमानस्थलको मुआब्जा निर्धारण : अवैज्ञानिक र हचुवाको मूल्यांकन | Everest Times UK
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धोकाधडीयुक्त वातावरणको सिर्जना गरी गत बिहीबार साँझ पछिल्लोपटक अधिग्रहणका लागि सूचित ९० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । यसको निर्णयको सूचना केही दिनमा पक्कै आउला । तर पछिल्लोपटकको मूल्य निर्धारण जसरी गरिएको छ, त्यो प्रक्रियाले यसभन्दा अघिल्लापटके अधिग्रहणका दु:खलाई माथ ख्वाएको छ । यसपटकको मुआब्जा निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि र प्रक्रिया अत्यन्त अमानवीय, असंवेदनशील, अपरिपक्कमात्रै छैन सनकी प्रवृत्तिको छ, संविधानको मर्म र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को अपव्याख्याका साथ गरिएको छ भन्दा कुनै द्विविधा लिनु पर्दैन । जनसरोकार समिति अध्यक्षको नाताले म मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रियामा संलग्न सबै प्रतिनिधिहरुलाई घोर भर्त्सना गर्छु !
संसार सबै देशमा जति पनि ऐन–कानुनहरु बनेका छन् तिनीहरुको निर्मितमा लुकेको एउटै आशय हुन्छ : जनताका हक अधिकारको सुरक्षा गर्नु । ऐनहरु, कानुनहरु, नीतिनियमहरु राज्यलाई जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छाउने उपाय देखाउन बनाइएका हुँदैनन् । जग्गा प्राप्ति ऐन पनि सरकारले चाहेको खण्डमा सजिलै जग्गा प्राप्त गरोस् भनेर मात्रै बनेको होइन, असंवेदशील र अमानवीय व्यक्ति मुआब्जा निर्धारण समितिमा परे नागरिकको सम्पत्ति, जनजीविका र आवासको अधिकार उल्घंन नहोस् भन्नका खातिर बनाइएको हो । संसारभर यस्ता प्रकृतिका ऐन छन् । यस्ता ऐनको मूलभूत मर्म यस्तो हुन्छ : कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य गर्दा नागरिकलाई विस्थापित गर्दा वा तिनको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा कम्तीमा दुईवटा कुराहरुको प्रत्याभूति गरिनु पर्छ ।
हामीले राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरुको उपस्थितिमा एउटा बृहत ऐक्यबद्धता सभाकै आयोजना गरेका थियौँ जसमा कास्कीका संघीय र प्रादेशिक सभासदहरु, पूर्व सभासदहरु, महानगर पालिकाका मेयर, सबै राजनीतिक दलका जिल्ला तहका नेतृत्वहरुको सहभागिता थियो । सबैले चिप्ला कुरा गरे । ‘तपाईंलाई दु:ख छ र हामीले मात्रै त्यो दु:खलाई हरण गर्न सक्छौँ’ भन्ने मार्काका आश्वासनका फुर्का जोडे । अनि जब खासमा काम गर्ने बेला आयो, अचानकसँग विलय भए । पोखराको कुनै पनि नेताले परियोजनाको इआइए रिपोर्ट निकाल्न र सार्वजनिक गर्न सकेन । न त सिचाइँ लगायत विषय जनजीविकाका विषयमा नेतृत्वले गर्ने भूमिका लिन सक्यो ।
कहिलेकाहीं सोच्छु, हाम्रा जनप्रतिनिधिले नचाहेका हुन या तिनले नसकेका हुन् ? सोच्छु, देशको कर्मचारीतन्त्रले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई टेर्न छाडेको हो या हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु आफैँ कठपुतलामा परिणत हुँदै गएका हुन् ? तर के हाम्रो क्षेत्रबाट सम्माननीय प्रम केपी ओली वा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा डा. बाबुराम भट्टराई सभासद भएको भए हाम्रो हालत यस्तै हुन्थ्यो होला ? हुँदैनथ्यो भन्ने जवाफ तपाईंको मन आएको छ भने कमजोरी कसको हो : नेतृत्वको कि समाजको कि कर्मचारीको ?